Git Sangit News » यी पुरानो नोट तथा सिक्काको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! शेयर गरि, भएकाले यसरी eBAY मा बेचौं ,
यी पुरानो नोट तथा सिक्काको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! शेयर गरि, भएकाले यसरी eBAY मा बेचौं ,
आफु संग भएको पुरानो नोटको एउटा ठुलो साइजमा क्लियर फोटो खिच्नुहोस् ।नोटको विविरण, सिरियल नम्बर, कुन जमानामा छापिएको सबै उल्लेख गर्नुहोस । तपाईले खिचेको नोटको सफा फोटो लाइ ebay को वेबसाइटमा अपलोड गर्नु होस् ।आफुले कति सम्ममा कसैले किन्न आए दिने ? मुल्य खुलाउनु आवस्यक छ । eBay को वेबसाइटमा नक्कली नोट अपलोड गर्न पाइदैन त्यसैले गलत जे पायो त्यहि नगर्नु होला ।यदि तपाइलाई नेपाली नोट बिक्रि हुदैनन भन्ने लाग्छ भने eBay को वेबसाइटमै गएर हेर्न सक्नु हुन्छ । त्यहाँ ५ डलर देखि १०० डलर सम्मका नेपाली नोट अपलोड गरिएका छन् ।